Anichkov महल - सेन्ट पीटर्सबर्ग एक ऐतिहासिक स्मारक
महारानी एलिजाबेथ, बस सिंहासन जानुभयो थियो, जसले, को हजार सात सय चालीस पहिलो वर्ष Anichkov महल को निर्माण मा एक उर्दी जारी। पीटर्सबर्ग तेजी विस्तार गरिएको छ। एक लम्बी पत्र "N" नयाँ architect मिखाइल Zemtsov उत्तरी राजधानी को आकार मा एक परियोजना raznoetazhnogo भवन बनाउन, र एक महान् भवन पूरा बारोक शैली प्रसिद्ध architect Rastrelli द्वारा।
ती दिन Fontanka शहर को सरहद थियो, र आधुनिक Nevsky संभावना को स्थान glade लिए। परियोजना गरेको लेखक अनुसार, Anichkov महल शहर प्रवेश गर्न आभूषण भएका थिए। उसलाई गर्न Fontanka नहर को सबै भन्दा देखि जो एक सानो बन्दरगाह संग समाप्त, dug थियो। एक दरबार, Peterhof जस्तै बिट निर्माण, एलिजाबेथ उनको मनपर्ने Razumovsky दान। पछि भवन बारम्बार एक उपहार रूपमा हस्तान्तरण भएको थियो, ज्यादातर महल विवाह लागि वरदान हो। शक्ति, क्याथरीन द्वितीय आए पछि, त्यो आफन्तहरूको Anichkov महल Razumovsky किनेको र यो दिनुभयो ग्रेगरी Potemkin। साथै, मनपर्ने आफ्नै स्वाद को दरबार को पुनर्निर्माण को लागि एक सय हजार rubles दिइएको थियो। फलस्वरूप, दुई वर्ष मा architect आई ई Starov क्लासिकल शैली मा घर पुनर्निर्माण। भइसकेका को बारोक raznoetazhnost को विशेषता थियो, भव्य स्टक्को नष्ट गरिएको छ, यो बन्दरगाह ढाकिएको थियो। फलस्वरूप, Anichkov दरबार थप गम्भीर र चिसो भयो।
को अठारौँ शताब्दीको अन्त्यमा निर्माण गर्ने खजाना बन्द किनेको थियो, र यो छोटो सम्राट्लाई गरेको क्याबिनेट समय स्थित भएको थियो। पछि, यो उहाँको लागि एउटा छुट्टै कोठा architect Quarenghi बनाइएको थियो। Anichkov अलेक्जेन्डर पहिलो hotly उहाँले क्याथरीन Pavlovna प्रेम प्रिन्सजर्ज Ordenburgskogo को पत्नी भइन्, आफ्नै बहिनी महान् रानी को विवाह मा प्रस्तुत।
1817 मा उहाँले भविष्यमा सम्राट को दरबारमा बसे निकोलस पहिलो। आफ्नो शासनकालको बेला architect Rossi को दरबार को हल केही को आंतरिक परिवर्तन भयो। निकोलस जाडो सारियो, त्यो Lent, लक्जरी अदालत यहाँ नियमित आयोजित बलमा समयमा Anichkov महल आए।
त्यहाँ पीटर्सबर्ग गर्न गाह्रो छ, जो बिना स्मारक छन्। Anichkov महल सधैं उत्तरी राजधानी को एक आभूषण भएको छ। यसलाई राम्ररी रूसी greats जीवन संग जोडिएको छ।
1837 मा, हिउँदमा एक गंभीर आगो पछि, निकोलस को अगस्ट परिवार म प्रसिद्ध दरबारमा केही समय बसे। यो पनि छोरा र सम्राट अलेक्जेन्डर, सबैभन्दा ठूलो रूसी कवि थियो जसले शिक्षकहरूको एक हुर्केका Vasily Zhukovsky। व्यक्तिगत अपार्टमेन्ट को दरबारमा उहाँलाई प्रदान गरेका थिए।
सेन्ट मा उन्नाइस सत्रौँ वर्ष Anichkov महल को क्रान्तिको पछि - छोटो समयको लागि पीटर्सबर्ग शहर को इतिहास को एक संग्रहालय थियो। 1937 मा त्यहाँ पायनियर्स को महल को उद्घाटन भयो। तर महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध दिग्गज दरबार को इतिहास मा परिवर्तन बारे ल्याए। पहिलो आफ्नो अस्तित्व समयमा जो घेर Leningrad को वीर रक्षक हजारौं को ज्यान सुरक्षित गरिएको छ शल्य चिकित्सा अस्पताल खोलिएको थियो यो ऐतिहासिक भवन, मा अक्टोबर 1941 मा। 1942 को वसन्त मा, अस्पताल हस्तान्तरण गरिएको थियो, र फेरि यहाँ मई मा पायनियर्स को महल थाले।
क्रिमीआ, संचालित पेन्सन: चयन मापदण्ड
इभ्यानोभो जिल्ला (मास्को): इतिहास र विवरण
कोरल सागर: स्थान, द्वीप, फोटो
पुरानो शहर (यरूशलेम): आकर्षण, छिमेक, रूसी मा योजना, फोटो
फ्रान्सेली चुम्बन के हो? कसरी चुम्बन गर्ने?
समुद्र युद्धमा केप Hanko बन्द (1714)
रूपक - ग्रीक मा allegorical छ
गाउँमा "Maynkraft" विभिन्न तरिकामा कसरी पाउन?